USolwazi WesiNgisi Ushicilele Incwadi Ngo-Douglas LivingstoneHealth Sciences
USolwazi Michael Chapman nencwadi yakhe esanda kushicilelwa ethi: Green in Black-and-White Times: Conversations with Douglas Livingstone.
USolwazi Michael Chapman waseSikoleni SezobuCiko ushicilele incwadi entsha enesihloko esithi-Black-and-White Times: Conversations with Douglas Livingstone.
Le ncwadi iqhakambisa izingxoxo phakathi kukasosayensi nombhali wezinkondlo ohlonishwa umhlaba wonke u-Livingstone kanye nomhlaziyi wemibhalo u-Chapman ababengabangani isikhathi eside.
Izingxoxo zabo – ezikhunjulwa kule ncwadi - zithatha abafundi zibabeke ezikhathini zakudala lapho kwakunezivunguvungu kwezombusazwe eNingizimu Afrika ngeminyaka yama-1970 nama-1980 kuze kube yisikhathi esilandele esobandlululo, lapho kubhekwa ukukhathazeka okungapheli kuka-Livingstone, njengososayensi nembongi, mayelana nokuthi umhlaba ungalashwa kanjani.
U-Chapman ukholelwa ukuthi le ncwadi iqala ngesikhathi somzabalazo wenkululeko ngeminyaka yokuphela kwama-1970 nama-1980 kodwa futhi ikhombisa nomzabalazo wokuguqulwa kwendlela okwakufundwa ngayo isiNgisi eNingizimu Afrika kusukela ekugxileni esikweni lamaNgisi aseBhrithani kuya ekugxileni kwezaseNingizimu Afrika nezase-Afrika.
‘U-Livingstone uvamise ukusithatha asibeke lapho izinkondlo zingakaze zisibeke khona phambilini. Futhi ubuye asibeke mhlawumbe nalapho kungakaze kufinyelele isayensi khona phambilini. U-Livingstone wayehlala egcizelela ukuthi, ngaphezulu kwakho konke, imbongi kumele ihlulelwe ngokwekhono layo lokunandisa. Wayezibona njengomuntu ongahlukile ekubeni yimbongi nomuntu nje ojwayelekile. Ngizamile ukukhombisa ukusebenza kwalendlela,’ kuchaza u-Chapman.
Unethemba lokuthi incwadi iyathokozisa futhi iyindaba emayelana nezinkondlo, isayensi, abantu abajwayelekile, izimpendulo zabantu neminyakazo yabo yokubhekana nezimo ezinhlobonhlobo.
‘Le ncwadi ithinta izindaba ezimayelana nomphakathi zesimanje njengoba kunokuhoxa kweBhrithani (Brexit) nokuphumelela kuka-Donald Trump okhethweni lokuba umongameli; kwezasekhaya, ibheka udaba lwama -#Fallists kanye ne-EFF. Sibona ukunyakaziswa okusibeka endleleni yokubeka uvo ngendlela eyamukelekile. U-Douglas Livingstone wenze ngempumelelo into engajwayelekile okuwukuhlanganisa umqondo wezezinkondlo nowesayensi noma ukucabanga ngokwezinkondlo kanye nokwesayensi.’
Incwadi iyatholakala ezitolo ezinkulu zezincwadi, ku-Amazon naku-UKZN Press.